कारागार र अपराध | चितवन पोष्ट दैनिक
कारागार र अपराध
२०७० मंसिर ७, शुक्रबार ०५:१३ गते
हरेक समाज वा राष्ट्रको समुन्नति, शान्ति र सुरक्षाका लागि आफ्नै प्रकारको नीति–नियम, ऐन–कानुन बनाइएको हुन्छ । असल कार्य गर्ने मानिसका लागि कानुनने संरक्षण प्रदान गरेको हुन्छ भने दुष्ट कार्य गर्ने मानिसका लागि कानुनले सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ । समाज वा राष्ट्रमा अमन–चैन कायम गरी विकासको पथमा लम्किन ऐन–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अति आवश्यक हुन्छ । मानिसको मन छलकपटपूर्ण र स्वार्थी हुन्छ । यही स्वार्थ र छलकपटपूर्ण व्यवहारले गर्दा मानिसले ऐन–कानुनको आँखामा छारो हाली विभिन्न किसिमका अनैतिक कार्यहरु जस्तै अपहरण, हत्या, बलात्कार इत्यादि जस्ता आपराधिक कार्य गर्न खोज्दछ ।
सबैजसो मानिसको मानसिकता भनेको छिटो पैसा कमाउने, मोजमस्ती गर्ने हुन्छ र सोझो औँलाले घिउ आउँदैन भन्ने सिद्धान्तमा आधार राखी यसैलाई शिरोपर गरी पैसा कमाउने छोटो बाटो रोज्ने गर्दछन् । तर, यस्ता किसिमका कुकृत्यले समाज र राष्ट्रको शान्ति, सुरक्षा र विकासमा सोझै हस्तक्षेप गरेको हुन्छ । यसले गर्दा देशको शान्ति सुरक्षामा सोझै खलल पु¥याउँछ । तसर्थ, यस्तै विरोधाभासले गर्दा कारागारको जन्म भएको हो । कारागारले यस्ता दृष्टि, जसले कानुनी साम्राज्यलाई हस्तक्षेप गर्छ र दुष्ट कार्य गर्ने मानिसहरुको विचार, कार्य, स्वयंको भावनालाई उपचार गर्ने र उनीहरुलाई समाज वा राष्ट्रको दायित्वबोध गराई राष्ट्रको समुन्नत विकासमा हातेमालो गरी अगाडि बढ्न प्रेरणा जगाउने उद्देश्य राखेको छ । नेपालमा कारागारको व्यवस्था राणाकालीन बेलाबाट नै गरिएको थियो । यसको व्यवस्था वा स्थापना वि.सं. १९७१ मा भएको तथ्य फेला पारिन्छ । यहाँ (कारागार) केवल दुई किसिमका मानिसलाई राख्ने गरिन्छ ।
१. थुनुवा ः
यसअन्तर्गत मानिसलाई कुनै आपराधिक कार्यको अनुसन्धानको क्रममा पुर्पक्ष गर्ने गरिन्छ ।
२. कैदी ः
यसअन्तर्गत मानिसलाई कुनै आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गरेपछि गल्ती पाएर सजाय तोकिएको हुन्छ ।
३. बन्दी ः
थुनुवा र कैदी दुवैलाई एउटा शब्दमा बन्दी भनिन्छ ।
वास्तवमा कारागारलाई सुधारगृह भनिन्छ । बन्दीहरुले कारागारमा रहँदा आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर्ने अवसर पाउँछन् । आफूले गरेका गल्ती, अपराधलाई फर्केर हेर्ने र मूल्यांकन गर्ने सुवर्ण अवसर पाउँछन् । अनि निश्चित समयको जेल सजाय भुक्तानपछि फेरि समाजमा जाँदा नयाँ जीवन बिताउने प्रण गर्दछन् भन्ने मान्यता पाइन्छ । तर, वास्तविकता निकै पृथक् छ । के साँच्चै कारागारले बन्दीहरुलाई सुधार्न सकेको छ त ? के कारागारमा गएपछि बन्दीहरुले आफ्नो गल्ती महसुस गरी प्रायश्चित गरी नयाँ जीवन जिउने प्रण गर्दछन् त ? के कारागार वास्तवमा नै सुधारगृह बन्न सकेको छ ? के कारागारको व्यवस्थाले समाजमा अपराध घटेको छ ? निश्चय पनि आज यी प्रश्नहरु निकै गम्भीर भएर मेरा सामु उभिएका छन् ।
जुन उद्देश्य र लक्ष्य राखेर कारागारहरु विकसित गरिएका छन्, लाग्दछ आज यी उद्देश्य र लक्ष्यहरु एकातर्फ थन्किएका छन् । कारागार कतिपल्ट अपराध सिक्ने विश्वविद्यालयका रुपमा परिचित हुने गर्दछ भने कतिपल्ट नरकुण्डका रुपमा परिभाषित हुने गर्दछ । यस्तै गरेर कुनै व्यक्ति कारागारमा पर्दा त्यो परिवारमा कति क्षति पुग्छ, सायदै मूल्याङ्कन गरिन्छ । हुन त, उसले गरेको अपराधले पीडित पक्षमा कम आघात र चोट पु¥याएको त हुँदैन, तर जानी–नजानी कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेपछि कारागारमा पर्दा पीडित परिवारबाहेक अर्को एक परिवार पनि बिचल्लीमा पर्दछ । अझ कोही परिबन्दमा परेर बिनागल्ती कारागारमा जीवन बिताउनु प¥यो भने त्यो जीवनको अति करूणामय दृश्य हुनेछ । झन् परिवारको प्रमुख व्यक्ति नै थुनामा प¥यो भने त्यो परिवारको हरिबिजोगै हुन्छ । कतिपल्ट यस्ता बेला चर्को मानसिक पीडाले हृदयाघात भएर सम्बन्धित व्यक्तिको मृत्यु भएको पनि पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छन् । यस्तो बेला टुहुरा बालबच्चाको अवस्था कस्तो होला ? यिनीहरुको भविष्यको रेखा कसले कोरिदेला ? यी अति नै संवेदनशील विषयहरु हुन् ।
समाजले कारागारका बन्दीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्छ । जसको सहारा वा कमाइमा उनीहरु बाँचिरहेका थिए, आज ऊ स्वयं जेलमा रहनुप¥यो भने उनीहरुको दैनिक रोजीरोटीको मुहान सुक्दछ र एउटा सुन्दर अनि रहरलाग्दो परिवार क्षणभरमै भताभुङ्ग हुन्छ । मुनाजस्ता बालबच्चाहरुका ओठमा हाँसो छिनिन्छ । जब कुनै व्यक्ति स्वयं जेल भुक्तान गरी समाजमा फर्किन्छ, समाजले उसप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइसकेको हुन्छ । कतिपय सरकारी पदहरुमा अयोग्य ठहराई राष्ट्रले पनि उनीहरुप्रति केही मात्रामा अन्याय गरेकै हुन्छ । उनीहरुलाई हेय र घृणाको जीवन बिताउने वातावरणको सिर्जना गरिन्छ । कतिपल्ट त समाजको छिः छिः र दूर–दूर सहेर बस्नुभन्दा मर्नु निको ठानेर आत्महत्याको प्रयास पनि गरिन्छ । कति व्यक्तिहरु लाचार भएर पुनः जेलमा फर्कने उपायहरु रच्न पुग्दछन् । किनभने, उनीहरुको हृदयमा यो अपहेलित जीवन जिउनुभन्दा त जेलजीवन धेरै उत्तम लाग्दछ । जहाँ न घृणा र द्वेषको सामना गर्नुपर्दछ, न त बाँच्नको निम्ति संघर्ष गर्नुपर्दछ, भलै साधारण लवाइखवाइ नै किन नहोस् ।
यदि समाजले हातमुख जोर्नका लागि दस नङ्ग्रा खियाउने अनुमति दिँदैन भने अन्तिम उपाय के हो त ? जवाफ स्पष्ट छ र त्यो हो अपराध । यदि जेलमा सर्वेक्षण गर्ने हो भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी बन्दीहरु धेरै पल्ट अपराध गरेर पटकपटक जेल भुक्तान गरिरहेका हुन्छन् । यहाँ बन्दीको नाजुक अवस्था र संवेदनशीलतालाई बढी व्याख्या गरी पीडित पक्षलाई गौण पार्न खोजिएको छैन, किनकि पीडित पक्ष पनि बढी नै मानसिक तनावमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ । अझ पीडित पक्ष नारी हो भने त समाजमा बाँच्न जटिल नै हुन्छ । तर, कारागारको व्यवस्थाले बन्दीहरुलाई कत्तिको सुधार्न सकेको छ त ? यसबारेमा गम्भीर भएर सोच्नु अति आवश्यक छ । कारागार भन्दैमा नराम्रो नियत, खराब आचरण भएको व्यक्ति बस्ने ठाउँ भन्ने सोच जुन आममानिसमा बसिरहेको छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्दछ । सही बाटो, उचित संगत वा जायज मार्गदर्शनको कमीले गर्दा कुनै व्यक्तिद्वारा जानी–नजानी अपराध हुन पुग्दछ । तर, समाजले उक्त व्यक्तिलाई खराब व्यक्ति वा अपराधी व्यक्तिको संज्ञा दिन बेर लगाउँदैन । सानो कुरालाई पनि ठूलो बनाउने यो समाज र समाजमा रहेका त्यस्ता केही व्यक्तिहरुद्वारा नै अपराध गर्ने र गराउनेको संख्या बढ्ने गर्दछ । सोझासाझा जनताहरु मात्र कारागारको परिबन्दमा बाँच्ने गर्दछन् । कारागारमा यस्ता थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छ । हुन त, देशले पनि कारागारका बन्दीहरुलाई तेस्रो नागरिकको संज्ञा दिएको छ ।
हाल नेपालका विभिन्न कारागारहरुमध्ये क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरु राखिएको ठाउँ चितवन कारागार पनि हो । १२५–१३० जनाको ठाउँमा हाल ५०० जति बन्दीहरु थुपारिएको छ जसले गर्दा खान, बस्न, सुत्न तथा दिसापिसाब गर्नसमेत धेरै समस्या छ । झन् चितवनलाई मेडिकल कलेजका रुपमा परिभाषित गर्दै जाँदा यहाँ विभिन्न किसिमका बिरामीहरु ल्याइपु¥याइन्छ जसले गर्दा स्वस्थ मानिसहरु प्रभावित हुन पुग्दछन् । राज्यपक्षद्वारा समस्याको समाधान पूर्ण रुपमा भएको देखिँदैन । झन् समस्यामाथि समस्या थप्दैछन् । दैनिक ४५ रूपैयाँ र ७०० ग्राम सिधामा भर पर्न सिकाइएको छ, तर अहिलेको महँगीले गर्दा त्यो पनि निकै अपुग भएझैँ लाग्छ ।
हुन त, अहिले राष्ट्रको कारागार व्यवस्थापन विभागद्वारा पनि विभिन्न सीपमूलक कामहरु लागू गरिएको छ, तर योग्यताअनुसारको आयआर्जन गर्ने खालका पनि लागू गरिनुप¥यो । नयाँनयाँ कामहरुको तालिम दिइनुप¥यो । चितवन कारागारमा मात्रै होइन, देशभर रहेका अरु ७२ वटा कारागारमा पनि यस्ता र योभन्दा अझै भिन्दाभिन्दै किसिमका समस्याहरु छन्, तर समाधानको निवारण भएको छैन । त्यसैले, बन्दीहरुको हकहितमा काम गर्ने सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुमा हामी बन्दीहरु के आग्रह गर्दछौँ भने हाम्रो समस्याहरुको निवारण गर्नका निम्ति सरकारसित अपिल गरियोस् । राज्य पनि हामी बन्दीहरुलाई उचित सेवासुविधा दिनबाट सधैँ हिच्किचाइरहन्छ । दीर्घरोग लागेका बन्दीहरुलाई कारागारमा राख्नुहुन्न भनेर हामीले पढेका तथा सुनेका थियौँ, तर कारागारमा त स्वस्थ तथा अस्वस्थ मानिसहरुलाई सँगै राख्नुपर्ने बाध्यता पनि छ, जसले थप समस्याको सिर्जना गरिरहेको हुन्छ ।
परनिर्भर तथा आश्रित हामी बन्दीहरु अनगिन्ती आशाका दीपहरु बाली राज्यबाट सहयोग, लगानी र उद्धारको प्रतीक्षामा बसिरहेका छौँ । बन्दीहरु जेलमुक्त भएपछि सरकारी निकायद्वारा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने, यस्ता अन्याय तथा भेदभावपूर्ण नियमको खारेजी तथा अन्य यस्तै हाम्रा हकहितको मागहरु राख्दै सरकारले जोडदार रुपमा आवश्यक पहलकदमी गरोस् भनेर आग्रह हामी सम्पूर्ण बन्दीहरुको रहेको छ ।